Ɔhene Nebukadnesar ne Mmerantewa Nnan a Wotiee Yehowa No | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mmerantewa Nnan Bi Tiee Yehowa
Bere a Nebukadnesar de Yudafo mmerante a wofi ahemfie kɔɔ Babilon no, ɔmaa ahemfie panyin bi a yɛfrɛ no Aspenas hwɛɛ wɔn so. Nebukadnesar ka kyerɛɛ Aspenas sɛ, ɔnhwɛ wɔn mu na onyi mmerantewa a wɔwɔ ahoɔden na wonim nyansa mma no. Ná wɔbɛtete saa mmerantewa yi mfe mmiɛnsa. Ná ntetee yi bɛma wɔabɛyɛ nnipa titiriw wɔ Babilon. Mmerantewa no besua Akkadia kasa a Babilonfo ka; wobesua sɛnea wɔbɛkyerɛw na wɔakenkan nso. Afei nso, na ɛsɛ sɛ wodi aduan a ɔhene no ne wɔn a wɔwɔ ahemfie hɔ di no bi. Mmerantewa no, wɔfrɛ emu nnan Daniel, Hanania, Misael ne Asaria. Aspenas maa wɔn Babilonfo din. Ɔfrɛɛ wɔn Beltesasar, Sadrak, Mesak, ne Abednego. Wohwɛ a, saa ntetee yi bɛma wɔagyae Yehowa som anaa?
Ná mmerantewa nnan yi asi wɔn bo sɛ wobetie Yehowa. Ná wonim sɛ Yehowa ahyɛ mmara sɛ mma wonni aduan a ɛho ntew. Enti na ɛnsɛ sɛ wodi ɔhene no aduan no. Wɔka kyerɛɛ Aspenas sɛ: ‘Yɛsrɛ wo, yɛmpɛ sɛ yedi ɔhene no aduan no.’ Aspenas ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Sɛ moanni na ɔhene hu sɛ mo anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ a, obekum me!’
Biribi baa Daniel tirim. Ɔka kyerɛɛ nea ɔhwɛ wɔn so no sɛ: ‘Yɛsrɛ wo, ma yɛn afumduan nko ara ne nsu nna du. Afei fa yɛn toto mmerantewa a wobedi ɔhene aduan no ho.’ Nea ɔhwɛ wɔn so no penee so.
Nna du akyi no, na Daniel ne ne nnamfo mmiɛnsa no ayɛ kama asen mmerantewa a aka no. Yehowa ani gyee sɛ wotiee n’asɛm. Na mpo, ɔmaa Daniel nyansa a ɛbɛma wate anisoadehu ne dae ase.
Wowiee ntetee no, Aspenas de mmerantewa no bɛkyerɛɛ Nebukadnesar. Ɔhene no ne wɔn kasae, na ohuu sɛ Daniel, Hanania, Misael ne Asaria adwenem abue, na wonim nyansa sen mmerantewa a aka no nyinaa. Oyii mmerantewa nnan yi sɛ wɔmma wɔnyɛ adwuma wɔ n’ahemfie hɔ. Sɛ asɛm bi kyere ɔhene adwene a, na ɔtaa frɛ wɔn bisa wɔn adwene wɔ ho. Yehowa na ɔma wohuu nyansa sen ɔhene no anyansafo ne wɔn a woyi nkonyaa no nyinaa.
Ɛwom sɛ na Daniel, Hanania, Misael ne Asaria wɔ obi man so deɛ, nanso wɔn werɛ amfi sɛ wɔyɛ Yehowa nkurɔfo. Wo nso, sɛ wowɔ baabi na w’awofo nni hɔ mpo a, wobɛkae Yehowa anaa?
“Mma obiara mmmu aberante a woyɛ no abomfiaa. Mmom no, yɛ nhwɛso ma anokwafo wɔ ɔkasa, abrabɔ, ɔdɔ, gyidi, ne ahotew mu.”​—1 Timoteo 4:12
Nsɛmmisa: Dɛn nti na Daniel ne ne nnamfo mmiɛnsa no tiee Yehowa asɛm? Dɛn na Yehowa yɛ de boaa wɔn?
Wɔankotow Ohoni No
Sadrak, Mesak, ne Abednego ansom Babilon hene no sika honi kɛse no.
Bɔ Yehowa mpae daa sɛnea Daniel yɛe no!